iTunes - အိုင်ဖုန်းသတင်း | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iTunes က တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Windows သို့မဟုတ် Mac အတွက် application ခွင့်ပြု ကျွန်တော်တို့ရဲ့တေးဂီတကိုဖွင့်ပါ သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖိုင်များ (ရုပ်ရှင်၊ စီးရီးစသည်) ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ဂီတကိုဝယ်ရုပ်ရှင်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ။ ထို့အပြင် iTunes သည်၎င်းနှင့်အတူကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iOS ထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ဆိုင်ညှိယူပါ ကွန်ပျူတာနှင့်အတူဒေတာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းသည်။ iTunes မှသတင်းများ၊ ဗားရှင်းအသစ်များ၊ လိုက်ဖက်ညီမှုစသည်တို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ယခုနှစ် Windows 10 အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းသစ်တစ်ခုစတင်မည်
MacOS Catalina ကိုဖြန့်ချိလိုက်ခြင်းဖြင့် Apple သည် iTunes ၏သဲလွန်စများအားလုံးကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များစတင်ရန် Windows ကိုအာရုံစိုက်မည်
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
အက်ပဲလ်သည် ၀ င်းဒိုးပရိုဂရမ်များဖန်တီးရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအင်ဂျင်နီယာများကိုရှာဖွေနေသည်။ အနည်းဆုံးတော့ ...
Windows အတွက် iTunes နှင့် iCloud တို့တွင်အားနည်းချက်တစ်ခုကကွန်ပျူတာများကိုအပိုင်စီးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ransomware တိုက်ခိုက်မှုများသည်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်လာပြီး ...
iTunes ၌ရှိသောဂီတကို Apple Music application သစ်တွင်ရနိုင်သည်
အကယ်လို့သင်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ iTunes ကတဆင့်တေးဂီတစာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုရင် ... ဖြစ်နိုင်တယ်။
iTunes သည် Windows အတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့က iOS 13, wstchOS 6, macOS Catalina နှင့် tvOS 13 တို့၏တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တွင် Apple ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
WWDC 2019 ၏နေ့နှင့်နီးသည့် iTunes ၏အသေခံခြင်း
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
iTunes သေဆုံးမှုသည်အလွန်နီးကပ်လွန်းပြီး ၂၄ နာရီအလိုတွင်အလွန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။
iTunes သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးသော application များအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်
Apple ကကျွန်တော်တို့ကို iTunes ကိုအပြည့်အဝမလိုချင်ဘူးဆိုရင်အရန်ကူးခြင်း၊ ပြန်ယူခြင်းစတာတွေလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။
ITunes သည်၎င်း၏နေ့ရက်များကို macOS တွင်ရေတွက်ပုံရသည်
အကယ်၍ အက်ပဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိလျှင်တညီတညွတ်တည်းအနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုစုဆောင်းထားလျှင်၎င်းသည် iTunes ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ MacOS နှင့် ...
ရှာဖွေခြင်းဖြတ်လမ်းများ၊ ပထမဆုံး iBooks နှင့် Amazon တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဖြတ်လမ်းများအကြောင်းကိုရှာဖွေခြင်း [SWEEPSTAKES]
Shortcuts များသည် Siri ကိုအသုံးမပြုမီနှင့်အပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ...
Apple Music ဝက်ဘ်ဖွင့်စက်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သီချင်းတွေကိုနားထောင်ဖို့ငါတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းခွင့်ပေးတယ်
ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်စတင်ပြီးကတည်းကသန်း ၄၀ ကျော်ကိုရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်။
iTunes ကိုကြေငြာပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင် Microsoft Store တွင်ရရှိနိုင်ပြီ
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Apple နှင့် Microsoft တို့သည် iTunes ဟုခေါ်သည့်ကြေငြာချက်သည် ...